किशोरीलाई होटेलमा लगेर बलात्कार प्रकरणः दुई युवक दुई महिनापछि पक्राउ
आज : वि.सं २०७८ माघ १५ शनिबार
२०७८ मङ्सिर १५ बुधबार
दिउसो २:५३ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । किशोरीलाई होटेलमा लगी दुई दिनसम्म बलात्कार गरी फरार भएको प्रकरणमा आरोपित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला अदालतले दुवै जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि झण्डै दुई महिनापछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
धनुषाको विदेह नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सानीआमा (मौसी) को घर गएकी एक १६ बर्षिय किशोरीलाई सोही स्थान बस्ने एक युवकले किशोरीलाई जनकपुर लगी ब लात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
सोही प्रकरणमा युवकलाई सहयोग गर्ने उनका साथी पनि पक्राउ परेको हो । आरोपित युवक आफैँ अदालतमा हाजिर भएको बताइएको छ भने उनका साथीलाई आज प्रहरी चौकी ढाडीले बुधबार पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको हो ।
वितग दुई महिनादेखि मुख्य आरोपित मानिएको युवक फरार रहेका थिए भने उनका साथी गाउँमै घुमफिर गरी प्रहरी जाँदा भाग्दै आएका थिए । उनी उपर मुख्य आरोपित भनिएको युवकलाई सो प्रकरणमा सहयोग गरेको आरोप छ ।
गत असोज ३ गते धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ८ हडबारा बस्ने किशोरीलाई सानीआमाकै घरबाट ललाई फकाई लगेर ब लात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ । सोही स्थान बस्ने अन्दाजी बर्ष २५ को युवकले किशोरीलाई ब लात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
स्थानीय उनकै एक साथीको मोटरसाईकल लिएर किशोरीलाई जनकपुरको होटेलसम्म लगेको पीडित किशोरीलाई उदृत गर्दै उनकी सानीआमा सनेचरी देवी महराले बताइन् । आरोपित युवक भदौ ६ गतेदेखि नै फरार रहेका थिए ।
दुई दिन अगाडी मुख्य आरोपित युवक पक्राउ परेको थियो भने बुधबार (आज) थप एक युवकलाई पक्राउ गरेको हो । गत कार्तिक ४ गते जिल्ला अदालत धनुषाबाट दुवै जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीले जनाएको छ ।
युवकलाई आजै जिल्ला अदातल धनुषामा पठाएको ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी मातहतको प्रहरी चौकी ठाढी झिझाका चौकी ईन्चार्ज एवम् सई सीताराम चौधरीले जानकारी दिए ।
डा. सिके राउत र किसानलाई मार्ने धम्की दिएकी मन्त्री यादव विरुद्ध जाहेरी !
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र किसान आन्दोलनमा सरिक भएका किसानहरुलाई समेत अप्रत्यक्ष मार्ने धम्की दिएकी मन्त्री यादव विरुद्ध उजुरी परेको छ । संघीय सरकारको भौतिक
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र किसान आन्दोलनमा सरिक भएका किसानहरुलाई समेत अप्रत्यक्ष मार्ने धम्की दिएकी मन्त्री यादव विरुद्ध उजुरी परेको छ ।
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवविरुद्ध विहिबार उजुरी परेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतलाई सार्वजनिक ठाउँमा ज्यान मार्ने धम्की दिएकी मन्त्री यादवविरुद्ध हुलाकमार्फत रौतहट प्रहरीलाई जाहेरी पठाइएको हो ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संविधानसभा सदस्य रञ्जित कर्णले मन्त्री यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी पठाएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि हुलाक मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको हो । उनले भने, –“सप्तरीमा जाहेरी लिन मानेनन्, पछि हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी पठाएको हुँ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा प्रहरीले घटना रौतहटको रहेकाले सप्तरीमा दर्ता हुन नसक्ने भनेपछि हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी पठाएको कर्णले सँचारकर्मीहरुसँग भने ।
‘मन्त्रीको अभिव्यक्तिले दुई समुदायबीच द्वन्द सृजना भई सोबाट जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय सम्प्रदायीक दंगा फैली दुई समुदायबीच राष्ट्रिय एकतासमेत असर पर्ने भएकाले अन्यायी मन्त्रीको अभिव्यक्ति मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९(४) विरुद्ध रहेकोले ऐ. संहिताको दफा ५(ग) बमोजिम हदैसम्मको कैद र जरिमानासमेत गरी पाउँ”–कर्णले पठाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
कर्णले मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न कर्णले अनुरोध गरेका छन् ।
मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मान्यताको खिल्ली उडाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उनको सो अभिव्यक्तिलाई नेपालको संविधानले अपराधी देख्ने भएको हुँदा तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ज्ञापन पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएकी थिइन् ।
मन्त्री यादवले भने आफू त्यस्तो केही पनि नभनेको भन्दै स्पष्टिकरण दिँदै आएकी हुन भने उनका समर्थकहरुले खुलेर उनको बचाउमा लागेका छन् । मन्त्री यादवले यसअिघ मिडियाहरुलाई समेत स्तरीयहिन मिडियाको सँज्ञा दिएकी थिइन् ।
उनले गत माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा कार्यक्रममा जाँदा किसानहरुले लखेटेपछि उनीहरुसँग रौतहट गौरको दोस्रो नरसंहार दोहरयाउने जस्ता अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
क्रुर घटनाः महिलालाई रातभरि सामुहिक बलात्कार, यौनाङग क्षतविक्षत, ओछयान रगताम्य !
मधेशकी छोरीहरुलाई DJ मा दिनहुँ 'बलात्कार' गर्छन तेस्रो दर्जाका गायकहरु
डा. सिके राउतलाई अब जनकारवाही सिकाउँछौँः यादव
सिके राउतको खुट्टा नकाटे म एक बाउको छोरी नाई : जसपाकी नेतृ साह
दोहोरो नागरिताका दुई अभियोगी जनकपुरबाट पक्राउ